ब्राजील र जर्मनी: कस्ले, किन जित्न सक्छ? - BBC News नेपाली
ब्राजील र जर्मनी: कस्ले, किन जित्न सक्छ?
फिल मक्नल्टी प्रमुख फुटबल लेखक, बीबीसी स्पोर्ट
तस्वीर कपीराइट VIPCOMMeGetty
Image caption विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमी फाइनलको व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा भैरहेको छ
ब्राजीलले किन जित्न सक्छ?
आयोजक राष्ट्रको हैसियतले पनि ब्राजीलको पक्षमा जुन समर्थनको लहर छ, त्यसको भावनात्मक आधारमा पनि ब्राजीलले आफ्नै देशमा विश्वकप जित्ने आशा गरेको छ।
कोलम्बिया विरुद्ध ब्राजीलको जीतमा फोर्टालेजास्थित रंगशालामा जस्तो खाले वातावरण थियो, त्यो यस्तो खेलमा बेजोड रहेको थियो।
सानो सानो अवसरहरुमा पनि ब्राजीलको पहेंलो रंगको जर्सी लगाएका प्रशंसकहरुको सामुहिक आवाजले पूरै रंगशाला गुञ्जायमान हुने गर्थ्यो।
यसपटकको ब्राजीलको टोली विश्वप्रसिद्ध पहेंलो जर्सी लगाउने यसअघिका विजेता टोलीहरु जतिकै उत्तम नहुन सक्छ। तर तिनीहरुलाई प्राप्त अब्बल दर्जाको समर्थनमा कुनै कमी भने आएको छैन। जस्ले यि खेलाडीहरुलाई विजय तर्फ डोर्याउन सक्छ।
ब्राजीलले घाइते नेइमारलाई गुमाएको छ तर हुक का रुपमा तिनीहरुसंग यस्ता खेलाडी छन् जो कोलम्बियासंगको खेलमा अवसरका लागि संधै तयार रहेका देखिएका थिए।
र लुइस गुस्ताभो “मिडफिल्ड” मा फर्केपछि कहिलेकाहीं कमजोर देखिएको ब्राजीलको रक्षा क्षेत्रमा एकछत्त सुरक्षा सहयोग पुग्नेछ।
दान्चीका रुपमा ब्राजीलसंग अनुभवी “डिफेन्डर” छन् जो चिआगो सिल्भाको ठाउंमा खेल्नेछन्।
Image caption ब्राजीलको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेको सिंगो देशको समर्थन नै हो
तर तिनीहरुको पक्षको सबैभन्दा बलियो हतियार भनेको समग्र देशको समर्थन नै हो।
जर्मनीले किन जीत्न सक्छ?
यसको सबैभन्दा सजीलो उत्तर हो - तिनीहरु प्राय: जित्ने गर्छन्।
यसपटक भने तिनीहरुसंग खारिएका खेलाडीहरु छन् जो विपक्षीको घरेलु मैदानमा खेल्नु पर्दा भोग्नु पर्ने असहजतालाई सजीलै पार पाउन सक्षम छन्। तिनीहरुसंग बायर्न म्युनिखका खेलाडीहरु पनि छन् जस्ले च्याम्पियन्स लिगमा सफलता हासिल गरेका थिए।
तिनीहरुले आफूलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग त गर्ने नै छन्, गोलकिपर मानुएल नोयरका रुपमा तिनीहरुसंग विश्वप्रसिद्ध खेलाडी छन्।
फ्रान्ससंगको क्वाटर फाइनल खेलमा करिम बेन्जेमाको प्रहारलाई जुन ढंगले नोयरले रोकेका थिए, त्यसले ब्राजीलले पार पाउनु पर्ने अवरोधको एक झलक दिएको थियो।
Image caption जर्मनीको टोली भरी नै विश्वस्तरका खेलाडीहरु छन्
जर्मनीसंग टोलीभरी नै उत्कृष्ट खेलाडीहरु छन्, कप्तान फिलिप लाम र माट्स हुमल्स बेजोडका खेलाडी हुन् भने सामी खेडिरा र विपक्षीका लागि खतराका रुपमा रहने थोमस मुलर। त्यसमाथि विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने मध्येका एका मिरोस्लाभ क्लोज पनि छन्।